Umcimbi obaluleke kunazo zonke kule nkathi ukubonakala kwamazinyo okuqala. Ungakhathazeki uma engabonakali ekupheleni kwenkathi yenyanga eyisikhombisa. Le nqubo ingumuntu ngamunye, kwezinye izingane ezingabonakala ekuqaleni, nakwabanye kamuva. Ngokuvamile ama-incisors aphansi aqala ukuqhuma, khona-ke ama-incisors engenhla, futhi kamuva kamuva. Okokugcina ukuvela kwemibiko. Ngenxa yalesi sizathu, ingane ezinyangeni ezingu-7, ehlukumezekayo, iba yinkimbinkimbi kakhulu. Ngokuqondene nokuthi i-gum yakhe ihlala ihlaziya njalo, kuyadingeka ukuthenga ama-teethers akhethekile amazinyo, akwazi ukukhipha ubuhlungu futhi okwesikhashana ukunakekelwa kwengane.
Kule minyaka yobudala, umntwana unesifiso sokuhamba ngokuzungezile, yingakho ukuthuthukiswa kwengane ezinyangeni ezingu-7 kuhilela ukuthuthukiswa kwamakhono okwenyuka. I-Karapuz inesifundo sezintshisekelo isikhala sefulethi noma igumbi elihlukile. Ngalesi sikhathi, izingane sezikwazi ukuhlala zodwa. Ekuqaleni, imizamo yabo ayinhle futhi ayifinyeleleki, kodwa njalo lapho ukunyakaza kwenziwa ngokwengeziwe.
Ukuthuthukiswa ngokomzimba kwengane ezinyangeni ezingu-7 kakade kukuvumela ukuba ungene ekudleni inyama ye-puree, umzimba wakhe ulungele ukuthola lolu hlobo lokudla.
Izinto ezibambelela ekwakhiweni kwengane ezinyangeni ezingu-7, aziphazamisi nje amakhono angokwenyama, kodwa futhi nezomphakathi. Ingane enomama kayise iqeqeshwe ukuba idle nge-spoon. Umjikelezo-ongewona u-spillweb kule minyaka ungasetshenziswa esikhundleni sendawo ejwayelekile, ngakho-ke i-crumb izofunda ukuthi ingayisebenzisa kanjani ngokushesha ngenhloso yayo ehlosiwe.
Ukuthuthukiswa kwengqondo kwengane ezinyangeni ezingu-7.
Phakathi nalesi sikhathi, kubaluleke kakhulu ukuhlinzeka ingane ngokuxhumana ngokugcwele nabantu abadala, lapho efunda ukuqhuba inkhulumomphendvulwano. U-Karapuz usuqala ukucabanga futhi aqaphele ukuthi kuye ngokuthi izenzo zakhe, abantu abadala abazungezile, bangasabela ngendlela ehlukile: ukumomotheka, ukudumisa noma okungafani nokuthukuthela nokuthukuthela.
Abantfwana balesikhathi sebevele benokwethenjelwa ngokwanele ukuba babe nomzimba wabo futhi bangakwazi ukuhamba bezungeza umbhede nombhede. Umgomo wabo oyinhloko ukuqonda, ngakho-ke abazali kufanele banikeze izimo eziphezulu zokufunda mahhala nokuphephile kwezinto ezizungezile ezinganeni. Ungavali imvuthu esiteji, mnike isikhala esiphezulu semidlalo.
Ekupheleni kwalesi sikhathi, umntwana uqala ukuba nesithakazelo ekuthuthukiseni imidlalo. Imizwa emisha, injabulo, emihle ingabangela ukuba ibhuku liqhume, ikakhulukazi uma lijabulisa ukuthinta futhi nemifanekiso ekhanyayo. Ukufunda kanye nomntwana, ukubiza izinto nokuchaza izithombe ezithombeni - lokhu kunomthelela ekwakhiweni kwenqubo yokucabanga nenkumbulo.
Ukuthuthukiswa kwengane enenyanga engu-7 kudinga amakhono alandelayo:
Ukuqaphela futhi okusheshayo ukuqhuma emuva nangemuva. I-karapuz iyahamba lapho ifuna khona.
Uyazi ukuthi ungasukuma kanjani, uhlanganise izinhlangothi zesikhumba sakhe, futhi wenze izinyathelo eziningana.
Uhlala ngaphandle kosizo lomuntu omdala.
Uguqa (ngosizo nonina).
Uhlukanisa ezinye izinto. Ufunda izinto eziseduze naye, futhi uyazi amagama abo. Noma kunjalo, lokhu kungenzeka ukuthi abazali banikeze kabusha igama lezingane zabo ngezikhathi ezithile.
Krokhe rasskalki ezithakazelisayo kanye nomama okhulunywe yi-disest. Enye yemidlalo ethandwa kakhulu yizandla. Kuyathakazelisa ukuthi, ngenkathi edlala, ingane ikwazi ukuzithinta ngamapeni futhi ngesikhathi esifanayo ixhumana nomama wayo, ifunde ukubiza amagama emva kwayo. Umama wengane ngalesi sikhathi uba ngumuntu obaluleke kakhulu, ufuna ukuzwa njalo ukuba khona kwakhe.
I-karapuz isivele isasebenza ngezandla zombili, ibamba amathoyizi ngokumelene nomunye futhi ithanda kakhulu ukuyiphonsa phansi. Ngesithakazelo ingane idlala nezibunjwa zesihlabathi. Ngemuva kwalokho, zingasuswa phakathi komunye nomunye, bese uzama ukuphinda uphinde ulandele emuva.
Ukukhetha ingane velokreslo
Pancake amnandi ezahlukene kanjalo Pripek